सरकार र डा.केसीबीच पाँच बुँदे सहमति, आज अनशन तोड्ने | Sabaiko Online
Home Flash News सरकार र डा.केसीबीच पाँच बुँदे सहमति, आज अनशन तोड्ने
सरकार र डा.केसीबीच पाँच बुँदे सहमति, आज अनशन तोड्ने
सरकारी र केसीका वार्ताकारबीच शुक्रवार साँझ भएको पाँच बुँदे सहमति ।
काठमाडौं- मेडिकल शिक्षा सुधारको माग गर्दै पटक पटक सत्याग्रह गर्दै आएका प्रा.डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएपछि डा. केसीले शनिवार आज बिहान अनसन तोड्ने भएका छन् । शुक्रवार साँझ सुरु भएको वार्ता मध्यरातअघि सहमतिमा पुगेको छ ।
वार्ताकारहरुले केसीका मागमा मध्यमार्गी नीति अपनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा अदालतले नै छानविन गर्ने भनेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र डिन पुनर्स्थापना ( जसको अवधि चार दिन मात्रै कायम रहेको अवस्था भएकाले )को विषयमा त्रिविविका कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट चिकित्सा शास्त्र संकायका डिनलाई पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय भएपछि डा.केसीले १४ औं चरणको अनसन सुरु गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै केसी अनसनमा बसेपछि अदालतले मानहानीको मुद्दामा उनलाई गिरफ्तार गराएको थियो। उनको गिरफ्तारीले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चा बटुलेको थियो । अदालतले सामान्य तारेखमा मुक्त गरेपछि डा. केसीले पुन:अनसन जारी राखेका थिए ।
शुक्रवार भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री दिपक बोहोरा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले र योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल सहभागि थिए भने डा.केसीका तर्फबाट चिकित्सक त्रय जीवन क्षेत्री अभिषेक सिंह र सुमन आचार्य सहभागि थिए । वार्ताकारहरुले केसीका मागमा मध्यमार्गी नीति अपनाएका छन्। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामामा अदालतले नै छानविन गर्ने भनेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्ने र डिन पुनर्स्थापना ( जसको अवधि चार दिन मात्रै कायम रहेको अवस्था भएकाले )को विषयमा त्रिविविका कुलपतिको ध्यानाकर्षण गराउने सहमति भएको छ ।